Mobilkaaga ayaa batteriga ka bixi kara sababtoo ah heerkulka oo aad u hooseeya | Androidsis
Digniinta la siinayo badmaaxiinta: heer kul aad u hooseeya ayaa "barafoobay" batterigaaga gacanta; waan sharaxeynaa sababta
Manuel Ramirez | | Batariga, Noticias, Tababarada
Ayaamahan markay waxaan jabineynaa diiwaanka heerkulka hoose, maskaxda ku hay in batteriga moobaylkaaga ayaa ku baabi'i kara ku dhowaad jiffy tiknoolajiyaddooda awgeed. Taasi waa in la yiraahdo, maadaama ay dhaafayso 15 digrii eber ka hooseeya, taxaddar haddii aad u baahan tahay inaad moobilkaaga isticmaasho.
Adigu ma noqonaysid qofkii ugu horreeyey ee lacag ka qaata taleefankaaga 100% si aad safar ugu baxdo leh heerkul aad u hooseeya, iyo marka aad u baahan tahay inaad adeegsato GPS si aad u gaadho goobtaada, si lama filaan ah ayaad isku aragtaa iyadoo taleefanku dansan yahay adigoon haysan batteriyaal isla markaana aan suurtagal ahayn inaad lacag ka qaaddo illaa aad ka istaagto saldhigga shidaalka ee soo socda ama xarunta adeegga.
1 Muxuu bateriga si deg deg ah u daadanayaa?
2 Ha ku dallacin taleefankaaga heerkul aad u hooseeya ama durba "barafoobay"
Muxuu bateriga si deg deg ah u daadanayaa?
Si aan si dhakhso leh isku fahamno, Tikniyoolajiyadda batari-ka ee lithium-ion ee hadda waxay ku tiirsan tahay falgallo kiimikaad oo taxane ah si ay u shaqeeyaan. Waa kuleylkan aadka u hooseeya ee gaabiya ama si fudud "barafooba" falcelintan.
Xaqiiqdii, taleefannada qaarkood sida Samsung, xitaa Galaxy Note10 +, ku xusan warbixinta dayactirka, oo laxiriirta waqtiga lacag bixinta, inay sida ugu fiican u shaqeyso marka heer kulku u dhexeeyo 10 ilaa 40 darajo.
Haddii aan wax yar ka sii faahfaahsanno kiimikada ku nool baytariyada lithium-ion ee aan dhammaanteen ku isticmaalno moobiilladayada, Dheecaanka bateriga wuxuu socdaa marka ion-yada lithium ay socdaan iyada oo loo marayo xalka dhinac dhinac dhamaadka batteriga, oo noqon lahaa anode, ilaa dhinaca kale iyo waxa loo yaqaan cathode. Markuu batteriga si buuxda u baxo, dhammaan ion-yadaas oo dhan waxay ku dhexjiraan anode.
Waxyaabaha qosolka leh ee waxaas oo dhan ku saabsan waa taas sababta qabowgu waxyeellada u leeyahay weli lama yaqaan batari. Sannadkii 2011, koox injineero batariyaal ah ayaa ku soo warramey Joornaalka 'The Electrochemical Society' (joornaal ku takhasusay cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda) in farsamooyinka saameeya waxqabadka hooseeya ee batteriga noocan ah aan weli la aqoon.
Ha ku dallacin taleefankaaga heerkul aad u hooseeya ama durba "barafoobay"
Hadda, haddii aan ku jirno booska in yar oo faahfaahsan ayaa laga sharraxay sida dhammaan ion-yadaas hadda looga helo dhinaca bateriga aan ugu yeerno cathode, xitaa ha ka fikirin inaad isku daydo inaad rartomaaddaama hawsha soo dejinta ay u dhici karto si lama filaan ah.
Halkan waxa ay tahay inaan samayno waa in yar oo dulqaad leh iyo taleefanka u qaad meel ama xarun aan kuleylkeedu hooseeyo. Si macquul ah, baytariga mobilkayagu wuxuu ku laaban lahaa xaaladdiisa dabiiciga isagoo leh isla boqolkiiba inta laga qaadayo.
Stephen J. Harris, oo ah farmashiistaha shaybaarka Qaranka ee Lawrence Berkeley, oo ku hoos jira xaalado heerkul caadi ah, isagoo adeegsanaya koronto ama ku soo dallaca batteriga ayaa "ion" ku soo celin doona ion godadka garaafka anode. Laakiin markii batteriga la yiraahdo aan dhahno "barafoobay", ion-yadaas ma awoodaan inay galaan garaafka oo waxay ka soo baxaan xalka si loo daboolo dusha garaafka sida lithium adag.
Hadda, haddii aan isku dayno inaan ka qaadno taleefanka gacanta isla xilligaas, iyadoo batteriga "la qaboojiyey", ayaa geeddi-socodka ayaa burburin kara waxqabadka iyo nolosha batari.
Taasi waa, iyo in la is fahmo midba midka kale si fudud, marka batteriga taleefankeenu wuxuu ku soo laabanayaa heerkul caadi ah, "ion "yaashu waxay ku laaban doonaan meeshoodii iyo boqolkiiba xamuulka ayaa ku soo noqonaya gobolkiisa.
si haddii aad u baahan tahay mobilkaaga si aad ugu sii socoto wadadaas waxaad dooneysaa inaad safarto dhammaan muuqaalka barafka leh, oo waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad is dhigto, ka fikir laba jeer; Gaar ahaan haddii aad ku socotid aagagga ka sarreeya 15 darajo Celsius oo ka hooseeya eber; Ha moogaan tan cashar ku saabsan sida loo nadiifiyo moobilkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Digniinta la siinayo badmaaxiinta: heer kul aad u hooseeya ayaa "barafoobay" batterigaaga gacanta; waan sharaxeynaa sababta
Sida loo kiciyo Kaaliyaha Google ee Google Chrome
Realme V15, khadka dhexe ee cusub ee jaban oo leh shaashadda 5G iyo AMOLED